မစမ်းသပ်သင့်တဲ့ ပီယဆေးလုပ်နည်း - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပရလောကအကြောင်း / မစမ်းသပ်သင့်တဲ့ ပီယဆေးလုပ်နည်း
Apann Pyay 5:54 AM ထူးဆန်းထွေလာ , ပရလောကအကြောင်း Edit
ပီယဆေးလုပ်နည်းကို သိအောင်ပြောချင် ပါတယ်..အရေးကြီးတာက လုံးဝမစမ်း သပ်ပါနဲ့.. အမှန်အကန်ဆေးပါ စာရေးသူအဖေရဲ့ သူငယ်ချင်း စမ်းသပ်ဖူးပါတယ် လုံးဝအမှန်ပါ ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်
(1) သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါတစ် ထည်သန့်သန့်လေးဝယ်ပါ။
(2) ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် မဟုတ်တဲ့နေရာ တစ်စိမ်း ဆန်တဲ့နေရာပေါ့ ဥပမာ..လယ်ကွင်း တို့လိုနေရာပေါ့
(3) အဲလိုနေရာမျိုးမှာ ငှက်ပျောပင်ကြီးကြီး လှလှတစ်ပင်ကိုရှာပါ။ ငှက်ပျောပင်က ကြီးပြီးလှမှရမှာပါ။
(4) ကိုယ်ကပီယဆေး လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးပါနဲ့ဘယ်သူ့ အကူအညီမှမယူပါနဲ့ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရမှာပါ။
(5) လက်ကိုင်ပုဝါလည်းရှိပြီ.. ငှက်ပျောပင်လည်း တွေ့ပြီဆိုရင် စလို့ရပါပြီ လပြည့်ညမတိုင်ခင်(7) ရက်အလိုမှာစရမယ်START စပြီ။ လပြည့်ညမရောက်ခင်(7) ရက်အလို ည(12) နာရီတိတိ တစ်ယောက်တည်း ခုနကငှက်ပျောပင်ဆီ ကိုသွားပြီးဝယ်ထား တဲ့လက်ကိုင်ပုဝါကို ငှက်ပျောပင်မှာသေချာချည်.. ပြီးတော့ငှက်ပျောပင်ကိုဖက်ပြီး ရည်းစားစကားပြော .ပြီးရင်နမ်း ( ကိုယ့်ချစ်သူတစ်ယောက်) လိုနမ်းရပြောရမှာနော် ဘယ်သူမှမမြင်မတွေ့ မသိပါစေနဲ့ ဒီလိုပုံစံမျိူး(6) ရက်တိတိလုပ်ရမှာပါ။
(6) ရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် လပြည့်ညရောက်ပြီလေ... လပြည့်ညကနောက်ဆုံး ရက်ပါ။ 7ရက်နေ့ပြည့်ညရောက် လာပြီစောစောကလိုပဲ ည(12)နာရီ ငှက်ပျောပင်ဆီကို သွားပါအဲဒီ့အချိန်မှာ.. ညတိုင်းပြောခဲ့ နမ်းခဲ့တဲ့ငှက်ပျောပင်အောက်မှာ မိန်းမချောချောလေး တစ်ယောက်ထိုင်နေလိမ့်မယ်
သူ့လက်ထဲမှာ ခင်ဗျားချည်ထားခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ ပါတွေ့ရင်ကြောက် မသွားပါနဲ့တွေ့ရင် သူ့အနားကိုသွားပုံမှန်သွားပြီး အရင်တုန်းကလို နမ်းပြောလုပ်ပါ။
သူကလူမဟုတ်ဘူးနော် ပြီးရင်တော့သူ့ လက်ထဲ့က လက်ကိုင်ပုဝါကိုလုပါ (ရအောင်လုပါ) ရပြီဆိုရင်နောက်ကို လုံးဝလှည့်မကြည့်ပါနဲ့. .ပြေးပါ ဆိုင်ကယ်ရှိရင် ဆိုင်ကယ် မောင်းပြေးပါနောက်က လိုက်လာပါလိမ့်မယ် ကိုယ်အိမ်ကိုသာရောက် အောင်ပြေးပါ ခလုတ်မတိုက်.. လှည့်မကြည့်..မကြောက်ပဲ ပြေးပါအိမ်ကိုရောက်ရင် တံခါးအားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပါ။ သူအိမ်ထဲအထိတော့ မလိုက်နိုင်ပါဘူး အဲဒီ့ညအိမ်ပြင်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့်မထွက် ပါနဲ့တော့ ခေါင်းမြှီးခြုံပြီး အိပ်လိုက်ပါ မနက်ရောက်ရင် အရာအားလုံးပြီးသွားပါပီ သင့်မှာပီယဆေး အစွမ်းထက်တဲ့ ပုဝါရှိသွားပါပြီ လိုအပ်သလို သုံးလို့ရပါပြီ သင်ပြောခဲ့နမ်းခဲ့တဲ့ အပင်ကိုပြန်ပြီး သွားကြည့်လိုက်ပါ ညှိုးပြီးသေသွားပါပြီ... မစမ်းသပ်ပါနဲ့.. အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရပါတယ် ဗဟုတုသရအောင်တင်လိုက်တာပါ
Credit - Ponenaka
ပီယဆေးလုပျနညျးကို သိအောငျပွောခငျြ ပါတယျ..အရေးကွီးတာက လုံးဝမစမျး သပျပါနဲ့.. အမှနျအကနျဆေးပါ စာရေးသူအဖရေဲ့ သူငယျခငျြး စမျးသပျဖူးပါတယျ လုံးဝအမှနျပါ ကွောကျဖို့လညျးကောငျးပါတယျ
(1) သငျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျငှနေဲ့ လကျကိုငျပုဝါတဈ ထညျသနျ့သနျ့လေးဝယျပါ။
(2) ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြ မဟုတျတဲ့နရော တဈစိမျး ဆနျတဲ့နရောပေါ့ ဥပမာ..လယျကှငျး တို့လိုနရောပေါ့
(3) အဲလိုနရောမြိုးမှာ ငှကျပြောပငျကွီးကွီး လှလှတဈပငျကိုရှာပါ။ ငှကျပြောပငျက ကွီးပွီးလှမှရမှာပါ။
(4) ကိုယျကပီယဆေး လုပျတော့မယျဆိုရငျ ဘယျသူ့ကိုမှ အသိမပေးပါနဲ့ဘယျသူ့ အကူအညီမှမယူပါနဲ့ တဈယောကျတညျး လုပျရမှာပါ။
(5) လကျကိုငျပုဝါလညျးရှိပွီ.. ငှကျပြောပငျလညျး တှပွေီ့ဆိုရငျ စလို့ရပါပွီ လပွညျ့ညမတိုငျခငျ(7) ရကျအလိုမှာစရမယျSTART စပွီ။ လပွညျ့ညမရောကျခငျ(7) ရကျအလို ည(12) နာရီတိတိ တဈယောကျတညျး ခုနကငှကျပြောပငျဆီ ကိုသှားပွီးဝယျထား တဲ့လကျကိုငျပုဝါကို ငှကျပြောပငျမှာသခြောခညျြ.. ပွီးတော့ငှကျပြောပငျကိုဖကျပွီး ရညျးစားစကားပွော .ပွီးရငျနမျး ( ကိုယျ့ခဈြသူတဈယောကျ) လိုနမျးရပွောရမှာနျော ဘယျသူမှမမွငျမတှေ့ မသိပါစနေဲ့ ဒီလိုပုံစံမြိူး(6) ရကျတိတိလုပျရမှာပါ။
(6) ရကျပွီးသှားပွီဆိုရငျ လပွညျ့ညရောကျပွီလေ... လပွညျ့ညကနောကျဆုံး ရကျပါ။ 7ရကျနပွေ့ညျ့ညရောကျ လာပွီစောစောကလိုပဲ ည(12)နာရီ ငှကျပြောပငျဆီကို သှားပါအဲဒီ့အခြိနျမှာ.. ညတိုငျးပွောခဲ့ နမျးခဲ့တဲ့ငှကျပြောပငျအောကျမှာ မိနျးမခြောခြောလေး တဈယောကျထိုငျနလေိမျ့မယျ
သူ့လကျထဲမှာ ခငျဗြားခညျြထားခဲ့တဲ့ လကျကိုငျပုဝါနဲ့ ပါတှရေ့ငျကွောကျ မသှားပါနဲ့တှရေ့ငျ သူ့အနားကိုသှားပုံမှနျသှားပွီး အရငျတုနျးကလို နမျးပွောလုပျပါ။
သူကလူမဟုတျဘူးနျော ပွီးရငျတော့သူ့ လကျထဲ့က လကျကိုငျပုဝါကိုလုပါ (ရအောငျလုပါ) ရပွီဆိုရငျနောကျကို လုံးဝလှညျ့မကွညျ့ပါနဲ့. .ပွေးပါ ဆိုငျကယျရှိရငျ ဆိုငျကယျ မောငျးပွေးပါနောကျက လိုကျလာပါလိမျ့မယျ ကိုယျအိမျကိုသာရောကျ အောငျပွေးပါ ခလုတျမတိုကျ.. လှညျ့မကွညျ့..မကွောကျပဲ ပွေးပါအိမျကိုရောကျရငျ တံခါးအားလုံးကို ပိတျလိုကျပါ။ သူအိမျထဲအထိတော့ မလိုကျနိုငျပါဘူး အဲဒီ့ညအိမျပွငျကို ဘာအကွောငျးကွောငျ့မထှကျ ပါနဲ့တော့ ခေါငျးမွှီးခွုံပွီး အိပျလိုကျပါ မနကျရောကျရငျ အရာအားလုံးပွီးသှားပါပီ သငျ့မှာပီယဆေး အစှမျးထကျတဲ့ ပုဝါရှိသှားပါပွီ လိုအပျသလို သုံးလို့ရပါပွီ သငျပွောခဲ့နမျးခဲ့တဲ့ အပငျကိုပွနျပွီး သှားကွညျ့လိုကျပါ ညှိုးပွီးသသှေားပါပွီ... မစမျးသပျပါနဲ့.. အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရပါတယျ ဗဟုတုသရအောငျတငျလိုကျတာပါ